आदित्य कुमारी - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- आदित्य कुमारी
कुरो छ सात वर्ष पहिलेको हो । यात्रा लामो थियो । भर्खरै सदरमुकाममा गाडीहरू पुगेका छन् । सदरमुकामले अलिकति भएपनि मुहार फेरेको छ । विद्युत, केही वर्ष पहिलेदेखी संचारले मारेको फड्को र जेनतेन बन्दैगएको यातायातको सुविधा । समग्रमा जिल्लाले विकासमा गति लिएको छ । कतै खाल्टाखुल्टी, कतै भल्ट्याङ्गभुल्टिङ्ग ढुङ्गा त कतै साँघुरो र फराकिलो डरलाग्दो कच्ची रोड । बर्खा लाग्यो’की पहिरोले रोडलाई चकनाचुर बनाईदिन्छ, जताततै भताभुङ्ग पारिदिन्छ । अनि यात्रीहरुको मनपनि खिन्न भइदिन्छ । डरैडरमा गर्नुपर्ने यात्रा पनि । गुरुको सानोगल्तिले यात आफसे आफ ब्रेक फेल भयोभने बसभरी भएका यात्रीहरिको ज्यान बुढीगङ्गाको पानीमा मिसिनसक्छ र माछीको चारो हामीहरु ।
अनेक घुम्तिमोडहरुलाई पार गरेर बल्ल कालोपत्रे रोड भेटीन्छ साँफेबगर पुगेपछि, त्योपनि गुणस्तर हिन पातलो लेपोमात्र लाएको रोड । विकासको नाउमा आएको सबै रकम ठेकेदारको खातामा र ठेकेदारनीको खातामा जम्मागरेर थोरै रकम लगानीमा कुखुरालाई चारो जस्तै छर्छन् र काम चलाउ भैहाल्छ । हाकिमहरुलाई यस्सो चियापानी खर्च मिलायो भने मुखै बन्द अनि विकास त उहीहो । विकासको नाउमा झोली भर्नेको जमात मात्रै यहाँ ।
अँ प्रसङ्ग त अन्तै मोडिएछ छोडिदिउँ यी कुरा । म कता जाँदै थिए भने बाजुरा जिल्लाको सदरमुकामबाट काठमाण्डौँ । साँफेसम्म मसङ्ग चिनेकै साथी थिए । उनको बयालपाटा अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भएकाले यतै झरीहाले । अब म सङ्गैको सिट खाली भयो । मेरो मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले लामो दुरीको यात्रामा मसङ्गै बस्ने मान्छे कस्तो आउँछ भनेर । युवा आउँछकी वृद्ध, युवती आउँछकी वृद्धा आइमाई, काखमा बच्चा बोकेकी पो आउँछकी कोही, यात मेरै उमेरकै जवान वा जवानी । जो आएनी मलाई बालमतलब । तर यौवनले भरीएको मेरो मनले त भन्दैथियो भर्खरै बिसबाइसम उमेरकी सुन्दरी नै आएर यो सिटमा बसुन, जोसङ्ग मेरो काठमाडौँको यात्रा तय गरु परिचय गरेर, राती निन्द्राको नाटक गरि उसैको छातीलाई न्यानो सिरानी बानाएर, अनि चिनजान पश्चात् मिठाइ जस्तै कुरा गर्दै र रमाउदै यो यात्रालाई सफल गरु र अविस्मरणीय योग्यपनि । अहिलेसम्म जति यात्रागरे मेरो सिटमा पुरुषमात्रै जहिल्यैपनि । मनले सोचेजस्तो कहिल्यै भएन तर, यात्रामा दुस्ख भने भोगेको छैन आजसम्म कस्सम।
साँफेबगरको बसपार्कमा दुईचार जना चढे तर, अझैँ मसङ्गैको सिटमा कोही आएर बसेन । बस हर्नबजाउदै रोडमा मिसियो र अघिबढ्यो बिस्तारै । मेरोमन भने निकै खुल्दुलीमा थियो, मसङ्ग बस्नेमान्छे कस्तो पर्छ भन्ने पिरलोमा परेर । जस्तो मान्छे भएनी के हुन्थ्योर मसङ्गैको सिटमा । एक रातको यात्रामा पनि के चाहिएको हो कुन्नि यो मनलाई
खुलेरै भनौ मलाई । जो आएर बसेपनी भोलि उ आफ्नै बाटो म आफ्नै बाटो तैपनि यो मनको भावभने बुझ्नै गाह्रो ।
अलि रप्तारमा गुढ्यो बस, पुल तरेर प्रहरी चेकपोस्टमा रोकियो । त्यस्तै बीस कटेर एक्काईस चढ्दै गरेको कपालको लट्टा पालेको पातलो र अग्लो कदको गहुँगोरो खलासी भाईले बस नम्बर र यात्रीसङ्ख्या टिपायो पुलिस मामालाई । झ्यालबाट बाहिर हेरीरहेको थिए एक्कसी मेरो कानमा एस्क्युज मी सर ! भनेको भाले स्वर गुन्जियो । मैले उसैलाई हेर्न मुन्टो बटारेर बोले हजुर ! भन्नुहोस् । सर माइण्ड गर्नुहुन्न भने म झ्यालमा बस्छु है ? मुस्कानमा बोल्यो त्यो मान्छे । सरी ! म झ्यालमै ठिक छु । यति भनेर फेरि झ्यालबाहिर हेरे । सोचेजस्तो यात्री भेटिन सायद त्यसैले होला उसलाई झ्यालमा बस्न स्वीकृति नदिएको मैले । उ बिस्तारै फत्फताउदै बोलेर बस्यो । त्यही मुस्कानमा त्यस्तैगरी बोलेर एउटी सुन्दर युवतीले भनेको भएत खुशिभएर झ्यालमा बस्न अनुमती दिनेथिए होला । अघिसम्मको खुल्दुलीले भरीएको मेरो मनमा एक्कसी कालो बादलले राजगर्यो जसरी निलगगनमा चम्किएर यो पृथ्वीलाई तातो किरण छरीरहेको सूर्यलाई कालो बादलले छोपिदिन्छ । आफ्नो मनलाई आफैले मनमनै ईश ल खा भन्दै धेरै लोप्पा ख्वाइरहे ।
बस उकालोका घुम्तीहरु मोड्दै अघि बढ्यो सल्लेरीमा । म भने आँखाले भ्याएसम्मको दृश्यलाई निहाल्दै हेरीरहे परपरसम्म । हरियाली वनपखा, सुन्दर सानाठुला थुम्काहरु, सेतासेता बादलका धब्बा जस्तै ससाना घरहरू सल्लेरीका हरेक मोडहरुबाट देखिने साँफेबगरको सुन्दर बजार । यो दृश्य देखेर आहा १ नभन्ने प्रायस् कमैहोलान् । जोकोही प्रकृतिलाई नजिकबाट निहाल्नसक्छ यहाँ आएर । समग्रमा सुदुरपश्चिमलाई स्वर्गको सुन्दर एक टुक्रा भन्दापनि फरक नपर्ला यसमा दुई मतै छैन ।
यात्रा निकैलामो अब त्यो मान्छेसङ्ग जसरीपनि बोल्नु छ । बाटोमा चुपरहेरपनि त म बस्नसक्दिन फेरी केही मिनेट म बोलिन भने खै के हुन्छ गित गुनगुनाउछु । त्यो भन्दा अब यो यात्राको साथी यसैलाई नबनाइ भएन । तर, बोल्ने पो कसरी अघि झ्यालतिरको सिटमा बस्न दिन क्यारे रिसाको होला मसङ्ग । बस त चौखुट्टे भन्ने ठाँउमा पो आईपुगेछ । म त कतिखेर निदाए छु पत्तो पाइन । म ब्युझिएँ सबै बाहिर भित्र गरिरहेको देखे र मपनी उठेर बाहिर गएर चर्पिघरमा मुतेर आए र उहीँ झ्यालतिरकै सिटमा बसे ।
मैले तपाईलाई चिनेजस्तो लाग्यो ? मलाई हेर्दै त्यो मान्छे बोल्यो । म कसरी बोलु भनेर सोचिरहेको बेला उहीँ केटो बिलेपछी मलाई त ढुक्क भयो । हजुर ! कतै देख्नुभयो होला । छोटो जवाफ फर्काउदै झ्यालबाट बाहिर हेरेर बोले म ।
तपाईं सुरेन्द्र सर होइन ?
हो । उसैलाई हेर्दै बोले म ।
सर ! नमस्ते ! म आदित्य कुमारी क्षेत्री । दायाँ हात अगाडी बढाउदै बोली आदित्य ।
आ‘दित्य‘. कु..कुमारी ? मैलेपनि हातमिलाउदै उसैलाई निकै शंकालु नजरले हेर्दै बोले ।
हो सर ! अनौठो मान्नुपर्दैन । छोडिदिउ यी कुरा । मैले त हजुरलाई लेखक भनेर चिनेको छु । आइमिन चिनेकी छु । हजुरको अर्को सङ्ग्रह कहिले आउदै छ बजारमा रु अधुरो प्रेम उपन्यासको पर्खाइमा छु ल ।
म त एकोहोरो हेरेको हेर्यै भए । कपाल केटीको जस्तो लामो(लामो, स्वर केटाको जस्तो, नामपनि केटा कै बिचमा फेरि कुमारी मैले केही बुज्नैसकिन । यसमा कुनै न कुनै रहस्य अबस्य लुकेको छ । यसको रहस्य खोतलेर उजागर गर्नैपर्छ मैले । फकाएर हुन्छ यात कुनै नयाँ आइडिया लगाएर मैले मनमनै अठोट गरे ।
अँ‘., अबको केही महिनामा आउँछ ।
अधुरो प्रेम नाम चाँही गज्जब छान्नुभएको छ है रु मेरो कुरो मान्नुहुन्छ भने अतीत राख्नुहोस है उपन्यासको नाम । कतै मेरो जीवनमा मेलखान्छकी के थाहा । अँ साच्चिकै हजुरको त्यो गजल सङ्ग्रहका हरेक गजल मेरै निम्ति लेखिदिए जस्तै सबै गजलले मेल खान्छ सर ! मसङ्ग । त्यसको नामपनि बब्बाल “कुल्चिएको गुलाब“।
होर ? यति धेरै तारीफकोलागि धन्यवाद ! तपाईलाई । खासै लेखक त होइन यस्सो मन बुझाउन कापीकलम पाएभने लेख्छु अलिअलि । साँच्चै तपाईंको घर….,
सर पनि….! घर यही हो पृथ्वी अनि छानो माथिको आकाश । यति बोलेर आदित्य मौन रह्यो ।
म पनि केही बोलिन । आदित्यको कुरो हावाजस्तो लाग्यो मलाई । हुन त उसको नाम पनि हावाजस्तै छ । पत्याउनै गाह्रो । कुरा गर्दागर्दै बस दिपायल पुगेको पत्तो नै भएन । अँध्यारोले बिस्तारै आफ्नो गतिलाई तीब्र पार्दै थियो । उज्यालो दिन रातमा परीवर्तन हुँदै थियो ।
ल है खाजा खानेभए खानुहोस सबैले । अब खाना त राती दशबजे हुन्छ । ढोकामा उभिएर भित्र यात्रुलाई हेर्दै खलासी भाइ बोल्यो । गुरु बस रोकेर झरीहाल्यो ।
हामी सबै बसबाट ओर्लिएर खाजाकालागि होटेलमा छिर्यौ ।
दूध चियासङ्ग कोकोनट बिस्कु खाएँ मैले । आ(आफ्नो रोजाईको खाजा खाए सबैले । आदित्यले भने एक प्याक लोकल माल मागेर खायो एक पिलेट ब्वायलर कुखुराको मासुसङ्ग । मैले चान्स मार्ने मौका आयो यसको सत्यतथ्य कुरो बुझ्नलाई । यसको नामको रहस्य र घरको बारेमा समग्रमा आदित्यको बारेमा ।
एक प्याक मेरो तर्फबाट है आदित्य जी !
जी हैन सर ! आदित्य मिस भन्नुहोस् आदित्य मिस ।
ओके ! मिस आदित्य ।
सरले भन्नुहुन्छ भने त एक होइन दुई प्याक नै स्वाट्टै पार्छु सर । लर्बराउदै बोल्यो आदित्य ।
अहिलेलाई दुई प्याक नै काफी छ नी । फेरि काठमाण्डौँसम्मको यात्रा छ भइहाल्छनी किन पिर…,
होइन सर ! म त कैलाली अतरियासम्ममात्र हो । मेरो कुरो काट्दै आदित्य रक्सीको ह्वास्स गनाउने सासले बोल्यो ।
ए ! होर अब बस जानलाग्यो बाँकी खानाखाने ठाउँमा है रु जाउ ।
चिया, बिस्कुट र एक बोत्तल लोकको रुपियाँ तिरेर बसमा चढे म । क्रमश सबै यात्री चढे । बसले हर्न बजायो । खलासी भाईले यात्रीलाई गन्यो र जाउ गुरु १ सबै चढिसके भन्यो । बस बिस्तारै अघि बढ्यो ।
सर ! म अब झ्यालतिर बसुकी रु खाएकोसबै आउला जस्तो भएको छ । जिङ्ग्रीङ भएको कपाल, रक्सिले गर्दा उसाएका परेलीका डिल, लोलाएका आँखाले मलाई हेर्दै गन्हाउने स्वरमा बोल्यो आदित्य ।
हस् ! हुन्छ । बस्नुहोस् तर, बाहिरै फाल्नुहोस है माल ।
ड…न्ट वरी सरकार ! झाल बा…रै फाल्ने छु ।
केही नबोलेरै एक अर्काको सिटमा बदलियौ हामी । बाहिर अँध्यारो भइसकेको थियो । बसभित्र भने ब्लबको उज्यालो चकमन्नै थियो । कालो मान्छेको अनुहारपनि टिलिक्क टल्किएर उज्यालो देखिने खालको । खलासीले ढोका बन्दगरेर क्याबिनमा बस्यो । कति यात्रीहरु त सुतिसके त कोही खासखुस कुरा गर्दै थिय । मलाई भने पटक्कै निन्द्रा लागेन । आदित्यको कुराले पिरोल्नसम्म पिरिल्यो मेरो मनलाई । सायद यो मेरो पहिलो छटपटी हो कसैको बारेमा बुझ्नखोज्दाको । मेरो सिट माथिबाट उज्यालो दिइरहेको ब्लबलाई हेरेर निकैबेर मनमा धेरै कुरा खेलाए । करीब दशपन्ध्र मिनेटपछि मनमा हिम्मत जुटाएर बोल्ने मकोशिस गरे । अरु कुरा भए भइ हाल्थ्यो तर, आदित्यको जीवनको बारेमा अझ यसो भनौ निजि मामलामा जान्न र बुझ्न खोज्दैछु त्यसैले न हो मलाई सोध्न अप्ठ्यारो लागेको ।
आदित्य जी । आदित्य मिस । हातले कोट्याउदै झालबाहिर टाउको राखेर बमन गरीरहेको आदित्यलाई बोलाए मैले ।
भ….न्नु…होस् । जिब्रो लर्बराउदै बोल्यो आदित्य ।
मेरो बारेमा तपाईलाई सबै थाहा छ । तर, तपाईंको बारेमा मलाई केही थाहा छैन मिल्छ भने बताउनुन आफ्नो बारेमा । मत सिक्दैगरेको लेखक….,
ओके सर ! ओके ! म भन्छु । के थाहा अलिकती ममा दया र माया जाग्यो भने मेरैबारे उपन्यास लेखि दिनुहुन्छकी । मेरो यो यथार्थ कथाले मन छोयो भने लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु नी सर ! म पाठक भएर आफ्नै जीवन कहानीको बारे हजुरले लेखेको उपन्यास कुनैदिन पढ्न पाइहल्छुकी । तर सर ! नाम चाहिँ च्यान्जगरेर है रु आदित्य पात्र बनाएर होइन ।
ओके हस ! त्यसको लागि पिर गर्नुपर्दैन मिस आदित्य ।
हजुर त पत्रकारपनि लौ कहाँबाट सुरु गरु म आदिबाट, मध्यबाट या त अन्त्यबाट रु प्रश्न गर्नुहोस मलाई । फेरि छोटो प्रश्नको लामो उत्तर आनेछ दिक्क नमान्नुहोलानी सर !
फेरि ह्वाल्ल उल्टी गर्यो उसले । त्यही मौका छोपेर
मोबाइलमा रेकर्ड सुरु गरे मैले ।
सरी सर ! अब सुरु गर्नुहोस् प्रश्न ?
खासमा तपाईंको घर कुन ठाउँ हो ?
अब, घर त अघि भने नी त्यही हो । खासमा म जन्मेको आजभन्दा बाईस वर्षपहिले धनगढी बजारको रातोपुल नजिकै सडक पेटीमा हो अरे । खै मेरो बाको हुन् पत्तो छैन, आमाले मलाई सडकमा जन्मदिँदा प्राणै त्यागेर माथी भगवानकोमा गइहालिछन् । मलाई आमाकै समुहका एकजना अंकलले स्याहारसुसार गरेर हुर्काएछन् । सडकपेटीको बास हजुर ! नाङ्गो शरीर, खाली पेट, हिंउदको चिसो, बर्खाको गर्मी र बर्षेपानी, धुलोमाटोको लडीबुडी, लामखुट्टे र उडुसको टोकाइ त्यो भन्दापनि बिना बाउको छोरो, जन्मदिने आफ्नी आमाको हत्यारो म यती भने बुझिहाल्नु हुन्छ नी सरले । आँखामा आँशुपुछ्दै बोल्यो आदित्य ।
मैले पहिलेको भन्दा अलि ठुलो सास फेरेर भने, अनि पढाइ ?
स्वाध्ययन हो । अंकल जता जान्थे उतै लान्थे काममा होस चाहे बटुको बोकेर माग्न । जब म पाँचको भए बजारमा डुलेर माग्न थाले दिनभरीको कमाइ कहिले सय हुन्थ्यो त हकिले पचास । सातआठको हुँदा माग्न छोडेर अंकलसङ्गै मिस्त्रीको काम सिके । मेरालागि बाआमा जे भनेपनि अंकल नै हो । बिस्तारै घरमा रङलगाउने कामपनि सिकियो । अब यो प्याक त उहिल्यै देखि हो खानसुरु गरेको । चिसोतातो, लामखुट्टे, उडुस र मनमा उब्जिएको पिरर ब्यथाको अचुक औषधिको काम गर्ने एकैगिलास भएपनि…..,
फेरि ह्वालै गर्यो झ्यालबाहिर टाउको हालेर अनि लामो सास फेर्यो आदित्यले ।
अनि त्यसपछि, आदित्य मिस । म बोले ।
अंकल र मैले सनोतिनो कामलाई जिम्मालिदै अरुलाईपनि हामीसङ्गै काममा लगाउदै अलिअलि जम्म गर्दैगयौँ र हसुलियामा सानो जग्गा किनेर त्यसैमा काठले बारेर कुसले छाएको छाप्रोपनि हाल्यौं बस्नकालागि । म र अंकल सडकपेटी छोडेर आफ्नै छाप्रोमा बस्दाको त्यो खुशीको दिन कसरी ब्यक्तगरु म हुजुरलाई ।
आदित्यले बोल्न छाड्यो ।
मैले लामोसास फेरेर भने, अनि तपाइको नाममा कुमारी किन ?
धनीगरीब, लुलोलङ्गडा, लाटोबहिरो, अन्धासबैलाई जवानीले एकनएकदिन छुदोरैछ । त्यसैको सिकार मपनि बने सोह्रासत्रको उमेरमा । त्यसैको परिणाम हो यो मेरो उपमा । हाम्रो छाप्रो नजिकैको गाउँको जमदारकी छोरीसङ्ग मेरो हिमचिम बढ्यो । ऊ आठ कक्षामा पढ्दै थिइ । बिस्तारै एकर्कालाई माया गर्नथाल्यौं । जेजे हुनुपर्ने हो सबै काम हुँदैगयो हामीमाझ । ऊ दश कक्षा जादासम्म हामी जोइपोइजस्तै भइसकेका थियौं । बिहेगर्ने सोच बनाइसकेको थिए मैले । उस्लेपनि बिहे गर्नुपर्छ भन्दै थिइ । एसएलसी परीक्षा सकेर बिहे गर्ने कुरो करीब पक्का भइसकेको थियो । मलाई पढ्न सिकाउनेपनि त्यही थरुनी हो । यो कुरो मेरो अंकललाई मात्र थाहा थियो त्योपनि मैले भनेर । बिस्तारै हाम्रो मायाको कुरो बाहिरीयो…., फेरि लामो सास फेर्यो र कपालमा हात राखेर जलिरहेको बत्तिमा हेर्यो आदित्यले ।
रक्सीको गन्धले मलाई सासफेर्न गाह्रो बनायो मुखलाई हातले छोपे र बोले । अँ त्यसपछि….,
हाम्रो छप्रोमा मैनबत्तीको उज्यालोमा खानाखाएर बसिरहेका थियौं अंकल म र त्यो मेरी हुनेवाली थरुनी । बिहे गरेर चारपाँच महिनापछि फर्किने गरेर । भोलिपल्ट हामी तिनैजना भागेर इन्डिया जाने सल्हाहुदैँ थियो ।
थारुहरुको गाँ नै उप्किएर आएर । मलाई र अनंकललाई आफ्नै भाषामा गाली गर्दै कुट्नथाले । त्यो थरुनीलाईपनि कुटेर लिए ।
टैले ठारुनीसङ्ग बिहे गर्ने रु के छ टेरो टागट रु पढेलेखेकी ठरुनीलाई डुस्ख डिने रु टो अब बाँछे ट बिहे गर्लास । यस्तै यस्तै भन्दै कुटीरहे हामीलाई ।
जब विहान म होसमा आँए रगतमा लतपतिएको थिए । छाप्रोपनि भत्काएर तहसनहस पारेको देखें । अब हाम्रो छाप्रोपनि रहेन । अंकलको त थारुको कुटाइले सास नै उडिसके छ, मलाई कर्म्दिने अंकलपनी मसङ रहनुभन । मेरो लिङ्गबाट रगत बगिरहेको देखें र त्यहाँ हात लिएर छामे मेरो त लिङ्ग नै छैन, काटेर फालेको रहेछ । म बिछिप्त भए । म फेरि बेहोस भए । दिउँसो पुलिस आएछन् र मालाई सेती अञ्चल अस्पतालमा ल्याएछन् । अनंललाई उतै जङलमा गाडेछन् । जब म होसमा आए अस्पतालको बेडमा पाँए । मलाई कर्म दिने बालेपनि मेरै कारण अकालमा परान त्याग्नु भयो । मेरा यी हातले दागबत्ती दिन पाइन । रुदैं बोल्यो आआदित्य ।
मैलेपनि नमन नत आँखा नै थाम्नसके मुटु भक्कानिएर आयो, आँखाबाट आँसु झरे मेरा । दुबैहातले आँशुपुछे मैल ।
मर्न धेरै कोशिस गरे तर, सकिन । काल नआइ जेगरेनी मर्न गाह्रो हुँदोरहेछ सर १ अब म केटा रहिन सर १ म गेय भए, छक्का भए, छोरा भएरपनि नपुंसकलिङ्गी भए । त्यसैले मेरो नामको पछाडी कुमारी म आफैले थपे र म आदित्य कुमारी क्षेत्री….,
हे भगवा यत्रो खेल खेलिस यो अनाथमाथी जो बल्ल त सडकको बाँस छोडेर सानो कटेरोमा रमाउदै थियो । यसको खुशी देख्न नसकेर फेरि गेय बानाएर सडक मै दोर्याइस कस्तो हो यो तेरो लिलापनी । मनमनै भगवानलाई सम्झिदै लामो सास फेरे र आँशुपुछे फेरि ।
अनि त्यो जग्गा ?
लथालिङ्ग सर ! फेरि फर्केर कहिल्यै गएको छैन त्यो ठाँउमा ।
रातिको खाना खानपनी बिर्सियौं हामी दुबैजनाले । बिहानीको झिसमिसे उज्यालोसङ्गै बस अत्तरीया पुग्यो । आदित्य अत्तरीयामा झर्यो । मैले फोन नम्बर दिएँ काठमाडौं आयौ भने भेट्नु भनेर ।
सर ! उपन्यास प्रकाशित भयो भने नबिर्सिनु है मलाई । बसबाट झर्दा हात मिलाउदै बोल्यो आदित्य । हस् ! भने मैले ।
बस अत्तरीयाबाट अघिबढ्यो काठमाडौँकालागी । सुखडबाट मसङ्गैको सिटमा मैले सोचेजस्तै गुलाबी उमेरकी युवती आएर बसी तर, मैले कुनै चासो नै दिइन किनभने मेरो मनमा आदित्यले डेरा जमाइसक्यो । मैले आदित्यकै बारेमा सोचिरहे बाटोभरी सम्झिरहे बेलाबेलामा ।
– सुरेन्द्र शाही “गुलाब कान्छो“, बाजुरा